‘उद्योगी पनि खत्तम छन्, उद्योगको बोर्ड लगाएर व्यापार गरिरहेका छन्’, मातृका यादबको अन्तर्वार्ता :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Apr 18, 2018 9:57 AM
फरक काम गर्ने शैलीका कारण मातृकाप्रसाद यादब सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रहिरहन्छन्। तेस्रो पटक मन्त्री बनेका यादबले अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।एलडिओलार्इ शौचालयमा थुनेका यादबले मन्त्री पद गुमाए तर आफ्नो खरो,निडर र साधारण छबिलार्इ परिवर्तन गरेनन्।‘हक्की र सन्की’ स्वभावका यादब उद्योगमन्त्री भएर आएको भन्दै निजी क्षेत्र केही त्रसित भएपनि उनको इमान्दारितामा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।उनै मन्त्री यादबलार्इ बिजमाण्डूका सविन मिश्र र बीपी साहले मन्त्री यादवलाई सोधे : उद्योगी व्यवसायी डराएको वा सशंकित भइरहेको अवस्था देखिन्छ। किन?
उद्योगमन्त्री बन्नु भएको छ। तपाईं जुन राजनीतिक पार्टी र सिद्धान्तबाट आउनु भयो त्यसले व्यक्तिगत पुँजी भन्दा पनि राज्यबाट धेरै कुरा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर तपाईं र तपाईंको प्रधानमन्त्री र पार्टीको घोषणापत्रले भने निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ?
मैले त्यही भन्दै छु। मन्त्री हुने बित्तिकै सम्राट ठान्ने। कर्मचारी राजा हुने। सेवा दिने भन्दा स्वार्थपूर्तीमा ध्यान धेरै भयो। म पनि मन्त्री हो नि। म आफैँलाई भनिरहेको छु। अहिले हाम्रो सरकारको जुन टिम छ, त्यसको उद्देश्य सेवा दिने छ। हामी भएकै चिजबाट सेवा दिन्छौँ। तपाईँ हेर्नुस् न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धि कहाँ पुग्यो, लोडसेडिङ हट्यो, यही संरचनाले काम गर्योि नि। कुलमानजी र जनार्दनजीले काम गरेको देखियो नि। राम्रो गरेको उदाहरण पनि छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री र सिएम (चेयरम्यान प्रचण्ड) दुवैले सेवा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसले हामीलाई पनि अझै सजिलो बनाएको छ।
तपाईंको मन्त्रालयमातहत विभिन्न धरासायी उद्योग छन्। कति बन्द अवस्थामा छन्। कर्मचारी त्यसै पालेर राख्नुपरेको छ। ती उद्योगलाई के गर्नुहुन्छ?
त्यतातिर नजाऔँ। फेरि धेरै गडबड हुन्छ। ठुला गफ लगाएर हुँदैन। हामीले अब भाषण मात्रै गरेर भएन। हामी स-सानाबाट सुरु गर्दैछौँ। अहिले जनतामा अपेक्षा धेरै छ। त्यसअनुरुप जनादेश हामीलाई दिएको छ।
तपाईंको महत्वपूर्ण दायित्व लगानी अभिवृद्धिका लागि पहल पनि गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। क्रान्तिकारी मातृका यादवसँग देशका उद्योगी व्यवसायी डराएको वा सशंकित भइरहेको अवस्था देखिन्छ। किन?
मैले त आव्हान गर्ने हो। निजी क्षेत्रको उच्च सम्मान हुन्छ। जहाँ जहाँ समस्या छ त्यो हल हुन्छ। मेरो एउटै शर्त हो, गडबड गर्न पाइँदैन। निजी क्षेत्रसँग जानुको अर्थ निजी क्षेत्रमा डुब्नु होइन। निजी क्षेत्रभित्रको कमी कमजोरीमा सरकार बग्ने होइन। सरकारीतर्फ जानुको अर्थ जेजे कमजोरी सरकारी क्षेत्रमा छन् तिनीहरुमा बग्नु होइन। हामी दुवैतर्फ करेक्सन गर्छौँ। उहाँहरु फाइल घुमाउँदा घुमाउँदा हैरान हुनुहुन्छ। मैले भनेको छु पाँच पैसा घुस नदिनुस्। घुस दियो भने काम हुँदैन। आखिर त्यो फाइल त म कहाँ आउँछ। थाहा त हुन्छ। त्यसैले फाइल कहाँ रोकिएको छ मलाई सूचना दिनुस् भनेको छु। कतिपय कानुनमा अप्ठ्यारा छन् त्यसलाई सहज बनाउन पहल गर्छु।
सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा धेरै छ। व्यापारभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा हामी राख्छौँ। व्यापार पनि चाहिन्छ। तर मगाएर खाने कि आफू उत्पादन गर्ने। हामीले यसमा हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो छ भने मगाएर खाइरहने तर आफ्नो उत्पादनलाई खतम गरिदिने। हाम्रो उद्योगीहरु पनि खतम छन्। उद्योगीहरु पनि साइन बोर्ड उद्योगको लगाएका छन् तर भित्र व्यापार गरेका छन्।
म एउटा कुरा भन्छु, सम्झिनुस् म मन्त्री होइन र तपाईंहरु पनि उद्योगी होइन। हामी नेपाली हौँ। हाम्रो देशका लागि के भूमिका हुन्छ सोच्दिनुस् भनेर हातै जोडेर भनेको छु। यो पनि एक किसिमको क्रान्ति हो। उहाँहरु पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। आमूल परिवर्तन गर्नेतर्फ हामी पनि लाग्नुपर्छ। परिवर्तन पनि विस्तारै हुन्छ। कर छल्ने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। सरकारले पनि घुस लिनु हुँदैन।
तपाईंको मातहत औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड छ। लगानी बोर्डको पनि तपाईं पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि तपाईंको पहल कस्तो हुन्छ?
स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी विस्तारमा सहयोग पुर्यानउने छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हाम्रो झुकाव स्वाभाविक रुपमा स्वदेशी लगानीकर्ताप्रति हुन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताबाट पार लाग्ने स्थिती अहिले छैन। स्वदेशी लगानीकर्ताको रकम स्वदेशमा छ/छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसले गर्दा हामी दुईवटै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ। हामी स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिन्छौँ तर पर्खेर बस्ने होइन।
अहिले चिनीको विषय आएको छ। स्वदेशी खाने कि विदेशी। स्वदेशी खाँदा महँगो पर्ने भयो। विदेशी खाँदा सस्तो पर्ने भयो। अहिले अब चिनीमा कर बढाउँदै छौँ। बजार भाउ नबढ्ने गरी कर बढाउन लागेका छौँ। त्यसले हाम्रो उद्योगको संरक्षण हुन्छ र किसानको पनि संरक्षण पाएका छन्।
तर पनि स्वदेशी उद्योगीलाई भ्याट फिर्ता लगायतको सुविधा दिइएको छ। किसानले उखुको मूल्य पाउँदैन। तपाईंकै मतदाताले उखुको पैसा नपाएको अवस्था छ नि!
अब त्यस्तो हुँदैन। अब कसैले पैसा पाउँदैन भने सिधा निवेदन हाल्दा हुन्छ। जसले पैसा पाउँदैन त्यसलाई ठगी मुद्दा लगाएर कारबाही हुन्छ। त्यो क्रम अहिले सुरु भइसकेको छ। जनताले सिधै निवेदन हाल्ने र त्यसको बोधार्थ मन्त्रालयमा दिनुपर्छ। हामीलाई पनि रेकर्ड आउँदैन।
केही दिनअघि म वीरगञ्ज गएको थिएँ। गत वर्षको उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल थियो। त्यहाँ साढे तीनसयमा दलालमार्फत उद्योगीले किनेको छ। चिनी मिलका मालिकले दलालबाट चिनी किन्छ। त्यसलाई कारबाही गर्छु उजुरी देऊ भन्दा किसानहरु दिँदैन। त्यसैले कही समस्या भएको छ। किसानले पनि हामीलाई मद्दत गर्नुपर्छ। तपाईंहरु मिडियाले त मद्दत गर्नुभएको छ।
नेपालमा व्यापारका लागि नन् ट्यारिफ ब्यारिअर धेरै छन्। कसरी समाधानका उपाय निस्कन सक्छन्?
व्यापारिक अवरोध धेरै छन्। त्यसलाई हटाउनुपर्ने छ। टर्कीमा धागो निर्यातका लागि केही विषय उठेका थिए। हामीले टोली पठायौँ। त्यसले अध्ययन गरेको छ। त्यसले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। समस्याहरु छन्। तर पहिले आफूले आँट गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वमा ट्रेड वार भइरहेको छ। हामीले त्यसमा भाग लिन खोइ त उत्पादन। उत्पादन छैन कहाँ भिड्नु।
विश्वका विभिन्न देशबाट हामीले सुविधा पाएका छौँ। डब्लुटिओको सदस्य भएर त्यस्ता सुविधा पाइएका छन्। ती सुविधा तत् तत् देशहसँग मागिरहेका छौँ। हामीलाई सुविधा दिने देशले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ। त्यसैले परस्पर स्वार्थलाई सम्मान गर्दै कमजोरलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।
एउटै उद्योगमा दुईवटा सरकारी निकायले फरक फरक मितिमा छापा मार्ने र फरक फरक निर्णय गरेको पनि भेटियो नी?
मिडिया पनि सुध्रिनुपर्छ। पत्रकारहरु पनि बिचौलिया छन्। तपाईंहरु आफ्नो कुरा उठाउनु हुन्न क्या! झन खतरनाक छ पत्रकारहरु। हाल्ने बेलामा ब्यानर हाल्ने अनि सानो खण्डन् गर्ने। हामीसँग नसोधी जे पायो लेखिरहेको हुन्छ।
अर्को कुरा कसैले दुईचारवटा कुरा लेख्दैमा केही फरक पर्दैन। मलाई त्यसले असर गर्दैन। तस्कर र भ्रष्ट्राचारको पैसाबाट चलेको मिडियाले मातृकालाई केही बिगार गर्न सक्दैन।
तस्कर र भ्रष्ट्राचारको पैसा मिडियामा लगानी छ?
एकदम अप्ठ्यारो पर्योत। मातृका नै पाँच वर्ष मन्त्री रहन्छ रहन्न ग्यारेन्टी छैन। तर यो सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने नीतिगत रुपमा राम्रो कुराको निरन्तरता हुनुपर्छ। हुनसक्छ हाम्रो नीतिमा कमी कमजोरी भेटिएलान्। त्यसलाई नयाँ आउनेले समृद्ध बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ अबको पाँच वर्षमा हामी संसारलाई उहादरण दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ।
म पहिलोपटक वन मन्त्री भएँ। दोस्रो पकट १३ दिन भूमिसुधार मन्त्री भएँ। त्यतिबेला माओवादी त पुरै क्रान्ति गर्न आएको भन्ने मेरो सोचाइ थियो र म त्यसमा हिँडेको हो। क्रान्ति भन्दा पनि क्रान्तिको जग अर्थात समाजवादको आधार तयार पार्न हामी काम गर्छौँ। अहिले तुलनात्मक रुपमा ठुलो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरुले काम नगरी मोजमस्ती गर्न खोजे। हामी धेरै महेनत गर्छौँ। रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास विना समृद्धि हुँदैन। त्यो हामीले बुझेका छौँ।
सस्तोमा श्रम बेचेर महँगोमा अर्काले उत्पादन गरेको वस्तु किनेर खाएर मात्रै हुँदैन। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। हामीसँग धेरै महत्वपूर्ण वस्तु छन्। तिनीहरु गिट्टीको भाउमा गइरहेका छन्। त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र उपयोग गर्नुपर्छ। हाम्रोमा संरक्षण भनेपछि धुप आरती लगाएर बस्ने मान्यता छ। त्यसरी हुँदैन। हाम्रो सम्पत्ति कौडीको मूल्य बेचिएको छ। कुन पहाडमा के कुरा छ भनेर अनुसन्धान गर्छौँ। कति क्षमता छ त्यो थाहा भएपछि त्यसको उपयोग गर्छौँ। बिर्ता बाँढेजस्तो पनि गरिएको छ। त्यो सबै अवस्थालाई हेरेर हामी अघि बढ्छौँ।